CaesarIA, iyo Yakavhurwa Sosi Kesari III | Linux Vakapindwa muropa
CaesarIA, iyo yakavhurwa sosi Kesari III
Chokwadi iwe unorangarira ngano yekuvaka guta mutambo Kesari III, imwe yemitambo yakanakisa yemakumi mapfumbamwe. Dare raCaesareIA rinorangarirawo uye nekuda kwechikonzero ichocho, ivo vakagadzira yakavhurika sosi yemutambo uyu wengano mutambo.
Kunyange zvakadaro iyo yekutanga Kesari III yaingowanikwa chete yeWindowsCaesarIA haisi kungowanikwa chete kuMicrosoft's system, asi isu zvakare tinayo kuti iwanikwe yeLinux, yeMacOS X uye kunyangwe yeApple mafoni.
Mutambo wepakutanga une mutambo wekuvaka guta, umo, isu tinofanirwa kuvaka guta reRoma uye kukwezva vagari vemo. Panguva imwecheteyo, isu tinofanirwa kugutsa zvese zvinodiwa nevanhu (chikafu, chinamato, varaidzo), isu tichitengesa nekutora mitero kuti isashome mari. Tinofanira zvakare kuchengetedza nyasha dzaKesari, tarisa chibvumirano neVamwari veRoma uye nekurwisa vanhu vemunharaunda uye budiriro dzinorwisa guta redu.
Mutambo une mamiriro enhau, mairi iro guta rega rega ratinosarudza richava rakaomarara, kugona kusarudza pakati pekugadziriswa murunyararo (pasina vavengi asi kuchimanikidza) uye kugadzirisa hondo (ine vavengi asi nyore kutonga). Iyo zvakare ine yeguta rekuvaka modhi, kutamba kungo pfuudza iyo nguva.
Musiyano mukuru pakati paKesari uye wekutanga KesariIII, ndiko kusimudzira kwakavezwa kwakaiswa naKesari. Iyo yakavhurwa sosi vhezheni inounza kuvandudzwa kune zvigadzirwa zvezvivakwa uye vanhu, zvichivaita kuti zviwedzerwe zvakanyanya, asi pasina kurasikirwa neichoicho chepakutanga.
Iyo CaesarIA chirongwa ichi chikamu chemushandirapamwe Crownfunding, mairi vanotarisirwa kuunganidza zviuru gumi zvemadhora kuita maitiro ese ekushandura magadzirirwo. Parizvino ivo vari munzira chaiyo uye vaunganidza angangoita $ 1800.
Panguva yekutamba CaesarIA unoda mutambo waKesariIII, mutambo uri nyore kwazvo kuwana pamambure kubvira is Abandonaware, ndiko kuti, software yekare iyo yakatosiiwa uye nekudaro ndeye mahara uye nekurodha mahara. Iyo yekutanga CDROM inoshandawo kune iyo yekuisirwa (sezvazvakaita nyaya yangu).
Pasina kupokana, nhau huru kune vanoda mutambo uyu wezano. Ini pachangu ndakapedza maawa akawanda ndakabatwa pakombuta ndichitamba CaesarIII naCesariIA, Ini ndinogona kuzviita pane chero chikuva nekusimudza kumeso.
Kuti utore Kesari, tinofanira kuzviita kubva ichi chinongedzo chepamutemo. Isuwo tinofanirwa kurodha pasi iyo Kesari wekutangaIII uye kana tese tadzora pasi, tinofanira kuenderera mberi mirairo iyi kuiisa mune yedu yekushandisa system uye nekudaro farira uyu mutambo mukuru pakombuta yedu sekunge tiri mumwe muna 1998.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Free Software » CaesarIA, iyo yakavhurwa sosi Kesari III
Mune chinongedzo chemushandirapamwe inotaura kuti yakavharwa nekuti yakatopera.
Iine isingasviki $ 1.800.
Izvo hazvina chekuita nechinyorwa, asi zvingave zvakanaka kana iwe ukanyora nezve imwe zvakare iri yeLinux. Inonzi Humambo Homwe (https://7kfans.com) MuUbuntu inoiswa nekunyora kune iyo 7kaa software Center. Ndinovimba unofarira mupiro.
Iyo vhezheni yaKesari III yaunoisa kurodha pasi ndeye kubvarura iyo isingade kuiswa, nekudaro, haugone kuteedzera iyo KesariIA yekumisikidza mirairo. Tarisa uone izvo, ndapota.
Jesu A. Alvarez akadaro
Kesari III anga asingawanikwe chete paWindows, paive zvakare neshanduro yeMac (Mac OS 7.6 kana yepamusoro)
Pindura kuna Jesús A. valvarez
Mutambo uyu hausi wekurasa, uchiri kutengeswa kwe € 3 uye zvishoma muzvitoro zvine hunyanzvi, zvese zvepanyama uye online. Kunze kwezvo, zvinonyatso kuzivikanwa kuti ndiani muridzi wazvino wekodzero yeiyo kodzero (Activision), saka hapana kana bvumidziro yepamutemo "hazvibvumirwe kuitisa chibharo, asi kukuvara kunoitwa kune asingazivikanwe kana asipo sangano ", inova nzira yechokwadi yekurasa. Icho hachisi chinhu chakareruka se "ndechekare, uye nekudaro chiri mahara" ... izvo zvinongova nhema.
Pindura kune Zvakadzama
Alexander pacheco akadaro
ku @A tsananguro: ndatenda nekujekeswa kwako, nekuti ini ndiri muchirongwa chebhizimusi kushandisa uyu mutambo wevhidhiyo senhare, asi kutanga, ndinofanira kutaura neActionivision
Pindura kuna Alejandro Pacheco
Ndiri kuda mumwe munhu kuti agadzire zvigamba kuti awire 3
Pindura kune ines
Maitiro ekuita Pokémon Go Mepu mune yedu Gnu / Linux
Iri zhizha rakabviswa iTunes naClementine uye Rhythmbox!